Gambling လောကထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင် - Myanmar Online Game
လူတွေဟာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အသက်ရှင်နေထိုင်ချိန်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ရင်း ဘာကြောင့် မိမိအနေနဲ့ ကြိုက်တာတွေရော မကြိုက်တာတွေရော နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်လာရတာလဲ? မိမိသဘောကျ နှစ်သက်တာတွေပဲ ဖြစ်လာရမှာမဟုတ်ဘူးလာ? အရက်စွဲနေသူတစ်ယောက်အတွက်တော့ အရက်သောက်နေရတဲ့အချိန်ဟာ တကယ် ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်ပျော်လှပြီဆိုတဲ့အချိန်ဟာ တခြားလူတွေအတွက်တော့သာယာချိန်တွေ ဖော်ကြူးမနေတာ အမှန်ပါပဲ။ Gambling ဆိုတာလဲ ဒါမျိုးပါပဲ ရလဒ်တစ်ခုဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ ကံကြမ္မာပေါ်မူတည်သလို တစ်ခါခါကျတော့လည်း ကိုယ်အနိုင်ရဖို့က ကိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ်လဲ မူတည်နေပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာမှာမဆို နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေအတွက် မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ ရလဒ်မျိုး ပိုမိုပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက် အောက်ပါ မဟာဗျူဟာအချက်လေးတွေကိုတော့ ပြောပြပါရစေ။
မိမိတစ်ယောက်တည်း အမြဲတမ်း အနိုင်ရနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားပါနဲ့
တကယ်လို့သင်က ငွေအနည်းငယ်ပဲရှိနေတယ်ဆိုရင် ပထမနေရာမှာ မကစားပါနဲ့။ စိတ်ထဲမှာ ငါဟာ အမြဲနိုင်နေမယ့်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေး မှတ်ထားပေးပါ။ အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ သင်များများကစားလေ သင့်အနေနဲ့ အနိုင်နဲ့အရှုံး အချိုးဟာ ပိုများလေလေပါပဲ။
မိတ်ဆွေက ကစားနေရင်း ငွေကုန်သွားတယ်ဆိုရင် ATM ငွေထုတ်ဖို့ပဲ ဇွတ်မသွားချင်ပါနဲ့
အကယ်၍ သင်က ကစားပွဲမှာ ငွေကုန်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ အနီးအနား ATM ကိုပဲ မျက်စောင်းမထိုးနေပါနဲ့။ သင်၏ credit card ကိုလည်း မျက်စောင်းမထိုးပါနှင့် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အကြံမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင် သင့်အနေနှင့်လည်း အတော်အတန် စိတ်အားထက်သန်ပုံဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ တခြားကစားသမားတွေအတွက် သင့်ပိုက်ဆံအိတ်မှ ငွေတွေကို အလွယ်တကူ မျှဝေပေးနေတာနဲ့ တူပါတယ်။
ကစားပွဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ အရက်တွေက free သောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အကန့်အသတ်တော့ရှိပါစေ။ အလကားရတိုင်း အငမ်းမရတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့။ လုံးဝမသောက်နဲ့လို့ပြောလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်သောက်ပါ။ အရက်သောက်များတော့ ရန်များလာမယ်။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြန်တော့ ထောင်ထဲဝင်ရပြန်ဦးမယ်ဆိုတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်သောက်ပါ လို့ပြောနေရတာပေါ့။
မိမိမိတ်ဆွေ အသိသူငယ်ချင်းမှ ငွေမချေးယူပါနဲ့
ဒီidea က ATM မှာ ငွေသွားထုတ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဘာပဲခြားနားသလဲဆိုရင်တော့ ATM မှာငွေထုတ်ပြီးပြန်ကစားမယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကို အမြန်ဆုံးဖြုန်းတီးနေရာကျမယ်။ အကယ်၍ အသိမိတ်ဆွေက ချေးမယ်ဆိုပါလျှင် မိမိငွေကြေး ရှုံးသည်သာမက မိတ်ဆွေရဲ့ ငွေကိုပါ ခဏတာအတွင်း ထိုင်ဖြုန်းလိုက်တာပါပဲ။ ဆိုတော့ လုံးဝမကောင်းတဲ့အကြံပါ။ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
လောင်းကစားနယ်ပယ်တွင် အခုမှ စကစားသူဆိုပါလျှင် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့မကစားပါနဲ့
အကယ်၍သင်က beginner အဆင့်ပဲရှိသေးရင် ကျွမ်းကျင်ကစားသမားတွေနဲ့ သွားမကစားပါနဲ့။ သင့်ငွေတွေကို သူတို့ဆီ မလှူပေးလိုရင် ပြောတာပါ။ ပုံမှန်လေးသာ ကစားပါ။ သင်၏ ကံကိုစမ်းရုံမျှသာ ပညာသင်ယူနေရုံမျှသာ ကစားပေးပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာပြီဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကစားသွားရုံပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပါးနပ်စွာ ကစားတတ်ပါစေ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Gambling လောကမှာ အောင်မြင်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်အလက်တွေကိုတော့ ကျင့်သုံးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်နော်။ ဒါမှ မိမိကိုယ်မိမိ အကောင်းဆုံး မွန်းမံထားတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ လောင်းကစား တိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုများသိမ်းပိုက်နိုင်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုရင်း ယခုမှစကစားမည့်လူတွေအတွက် “စလော့ဂိမ်း” အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။